Banyere Anyị - Changzhou Ọwụwa Steel Ball Co., Ltd.
Ọwụwa ọwụwa ígwè bọl ụlọ ọrụ na-tọrọ ntọala na 1992. Anyị na-pụrụ iche na mmepụta nke ígwè obi ụtọ na integrated sicentific nnyocha na commeicial ahia.
Ruo ọtụtụ afọ, dabere na ntọala ụlọ ọrụ wujin metallic ball, wujin, anyị na-arara onwe ya anya na nyocha na imepụta ụdị thlnique nke bọọlụ na -emepụta ma na -emepụta bọọlụ nchara dịka chrome steel bọọlụ (aisi52100), carbon steel bọọlụ (aisi1015) steel bọọlụ (aisi304.316.420.440c) .A na-eji bọọlụ ndị a n'ọtụtụ ebe na bea ụgbọ ala, ngwa ọrụ eletriki, okporo ụzọ na ihe ndị ọzọ
Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị etinyela aka na nyocha na mmepe nke teknụzụ ọla kọpa na-arụ ọrụ na Wujin metal ball Institute Institute. Ọ kachasị na-emepụta 1-16mm chromium steel (aisi52100), na-ebu bọọlụ nchara, carbon steel (aisi1015.1045.1085), igwe anaghị agba nchara bọọlụ (aisi304.316.420.440c), alloy steel ball, copper steel and other metal bọọlụ. A na-ejikarị ya eme ihe na biarin, ụgbọala, ngwaọrụ eletriki, usoro nduzi, bọọlụ bọl na ngwaahịa ndị ọzọ. Ọ na-ukwuu tụkwasịrị obi na hụrụ n'anya site ahịa n'ụlọ na mba ọzọ. N'otu oge ahụ, ọ na-amịpụta bọọlụ na-efe efe na ụdị nchara bọọlụ pụrụ iche.
Usoro Uche Ọgwụgwọ Okpomọkụ Pụrụ Iche
Mepụtara a pụrụ iche ọtụtụ ihe mejupụtara okpomọkụ ọgwụgwọ technology, si waya ịbịaru, oyi ube, ezigbo bọl, okpomọkụ ọgwụgwọ, egweri, gụchara, polishing, ihicha nnyocha, nkwakọ, na usoro nke usoro si ọkara okokụre ngwaahịa na okokụre bọl ahịa.
Ngwa Ule di elu
Ọ nwere ike ịnwale ụdị kemịkal niile, akụrụngwa akụrụngwa yana nzukọ dị n'okpuru ọkọlọtọ ISO17025. Gbaa mbọ hụ na ngalaba mmesi obi ike nwere ike nweta nnabata data siri ike na usoro nrụpụta niile site na akụrụngwa na-abanye n'ụlọ ọrụ na nnyefe ngwaahịa, ma nyekwa nchịkọta data maka ndị ọrụ teknụzụ na ndị ahịa maka nyocha na mmepe nke ihe ọhụrụ na usoro ohuru.
The Complete Steel Ball Production Line
A na-ejikwa kọmpụta na-emepụta bọl na-emepụta ígwè 4 anyị. N'ihi oke mbelata nke ntinye aka na nhazi usoro, ngwaahịa anyị dị oke mma ọbụna n'ụdị dị iche iche. Iji ngwaahịa anyị nwere ike imezu ihe ị chọrọ.
Nkọwapụta nke Ogo System
Na a ukwuu ghọtara management usoro, anyị agafeela ihe fọrọ nke nta 30 mba na ulo oru asambodo, dị ka ISO9001, NQA ISO14001, OHSAS18001, BV, wdg; n'otu oge ahụ, Siemens, GE na ụlọ ọrụ 500 ndị ọzọ enyochala usoro njikwa mma nke ngwaahịa anyị dị iche iche.
3mm ọla kọpa, Bọọlụ Brass, Bọọlụ Ọla kọpa siri ike, Ball siri ike, Bọọlụ Bramm 3mm, Ss304 Nchara Ball,